भगवान श्रीकृष्णका १६००० रानीः भ्रम र यथार्थ | नेपाल दर्शन
भगवान श्रीकृष्णका १६००० रानीः भ्रम र यथार्थ
२४ असोज २०७६
केहि हिन्दुहरुमा भगवान श्रीकृष्ण र उहाँका १६००० रानीका बारेमा भ्रम रहेको पाइन्छ । धेरैले यो मान्दछन कि, भगवानको सोह्र हजार नै रानीहरु थिए, वा श्रीमतीहरु थिए । तर यो सत्य होइन । हिन्दु बाहेक यो विषयमा धेरै प्रश्न गर्ने र गलत व्यख्या गर्नेमा क्रिश्चियन र मुश्लिमहरुहरु पनि पर्दछन । धर्मप्रचार तथा धर्मान्तरण गराउदै हिडेका क्रिश्चियन मिशनरीहरु अनपढ सोझा हिन्दुलाई प्रश्न गर्दछन, “तिम्रा भगवानको त सोह्र हजार श्रीमतीहरु थिए, यस्तो पनि भगवान हुन्छ ?” सोझा नेपालीहरुले यस विषयमा जानेका हुदैनन, वा राम्रोसंग बुझेका हुदैनन । त्यसैले उनिहरु त्यस्ता दुष्ट इसाइहरुको कुरा पत्याउदै सहि मान्न पुग्दछन ।
इसाइहरुको गलत व्यख्यामा पर्ने विषयहरुमा भगवान शिव संग जोडिएको शिवलिगं, गाँजा, धतुरो हो भने, रामसंग जोडिएको सितालाई वनवास हो । श्रीकृष्ण संग जोडिएको विषयहरुमा सोह्र हजार गोपिनिहरु र रासलिला भैहाल्यो । त्यस्ता कैयन विषयहरु छन, जसको माध्यमबाट दुष्ट इसाइहरु अनपढ सोझा हिन्दुहरु संग कुतर्क गरेर जित्न सकियोस, र आफ्नो सम्प्रदायमा ल्याउन सकियोस भनेर लागीपरेका छन ।
के हो त सोह्र हजार रानीको रहस्य ?
नरकासुर भन्ने राक्षसले सोह्र हजार केटीहरुलाई बन्धक बनाएर राखेको थियो । भगवान श्रीकृष्णले त्यस नरकासुर भन्ने राक्षसलाई युद्ध गरी मारेर ती सम्पुर्ण केटिहरुको उद्धार गर्नुभयो । उहाँले सबै केटिहरुलाई नरकासुर राक्षसको बन्धनबाट मुक्त गराउनुभयो । तर ति केटिहरु भगवानलाई देख्नेवित्तिकै अत्यन्त मोहित हुन पुगे । भगवानप्रती शरणगत् भइहाले र मनमनै यो पनि प्रार्थना गरे कि श्रीकृष्ण नै मेरो पति बनून । भक्तवत्सल भगवानले पनि ति अवला नारीहरुको मनको भाव बुझेर उनीहरुको प्रार्थना स्वीकार गरिदिए र भगवानले उनीहरुलाई आफ्नो महलमा रानी सरह सम्मान दिएर राखे । यहाँ बुझ्नैपर्ने महत्वपुर्ण कुरा के छ भने ति रानीहरु (केटिहरु) स्वयं लक्ष्मीकै अंशस्वरुपा थिए (भागवत गिता १० ५९ ४३) ।
त्यस्तै कृष्णोपनिषदले प्रष्ट्र पारेको छ कि,
“ऋचोपनिषदस्ता वै ब्रम्हरुपा ऋचः स्त्रीयः” १३ औ मन्त्र
अर्थात भगवानको सोह्र हजार रानी वेद र उपनिषदका ऋचा नै हुन ।
माथिका तथ्यहरुका अनुसार भगवान श्रीकृष्ण कुनै व्यभिचारी होइनन, अपितु एक महान समाजसुधारक हुन जसले अपराधी राक्षसले यातना दिई थुनेर राखेका महिलाहरुलाई मुक्त गरिदिए । उनिहरुलाई सम्मान गरे । आधात्मीक अर्थमा ति महिलाहरु वेदका ऋचाहरु थिए, जसमाथी राक्षसको नियन्त्रण थियो, त्यसलाई मुक्त गरिदिए । कथित महिलाअधिकारकर्मी तथा विधर्मीहरु यसको वास्तविकता बुझ्ने चेष्टा समेत गर्दैनन । किनकी उनिहरु धर्म र संस्कार नमान्ने म्लेच्छ प्रवृत्तीका मानव रुपधारी हुन जसलाई सत्यको के मतलव !
(अर्को भागमा भगवान शिव सम्बन्धी भ्रम (गाँजा, धतुरो, लिगं) र श्रीरामको सिता वनवासका बारेमा प्रष्ट्याइने छ ।)